बिधान र बिशालको जोडीलाई उपाधी – Khel Dainik
बिधान र बिशालको जोडीलाई उपाधी
पुष ६, २०७८ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । कास्कीका बिधान अधिकारी र बिशाल खड्को जोडीले हरिसिद्धि खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता २०७८ को उपाधी उचालेका छन् ।
उक्त जोडीले प्रयागपोखरी ब्याडमिन्टन क्लबका पनिव लिनथेप र सुरोज महर्जनको जोडीलाई २१–१९, १९–२१ र २२–२० को सेटले पराजित गर्दै उपाधी उचालेका हुन् । बिधान र बिकासको जोडीले पविन र सुरोजको जोडीलाई बा¥हबिसे कपमा पनि पराजित गर्दै उपाधी उचालेका थिए ।
बिजयी टिमले ५० हजार नगद मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । यस्तै उपबिजयी टिमले २५ हजार सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । तृतीय स्थान प्राप्त गरेका बुटवलका बिश्वास नेपाल र गणेश रायमाझी तथा एपिएफका पेम्बा शेर्पा र चितवनका राजु थापाको जोडीले नगद १० हजार, मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी प्राप्त गरे ।
हरिसिद्धिस्थित आयोजककै आफ्नै कभर्डहलमा भएको प्रतियोगिताको पुरुष यु १९ तर्फको प्रतिस्पर्धामा सिक्सटिन फिदरका क्षितिज खनालले उपाधी हत्याए । उनले बालकुमारी रिमिक्स क्लबका आयुश्मान नागरीलाई २१–१२, २२–२० ले पराजित गर्दै उपाधी कब्जा गरेका हुन् ।
बिजयी खनालले नगद १५ हजार सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । उपविजयी नागरीले नगद १० हजार मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । यस्तै तृतीय स्थान प्राप्त गरेका सूर्यदर्शन ब्याडमिन्ट क्लबका सन्तोष पनेरु र क्लब सेभेनका डेभिड थापा मगरले नगद ५ हजार सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
त्यस्तै महिला यु १९ तर्फ योङ्गुबहालकी रोज पाण्डेले उपाधी जितिन् । उनले बालकुमारी रिमिक्स क्लबकी प्राथना देउबामाथी २१–१८, २१–१४ को सहज जित निकालिन् । बिजयी पाण्डेले नगद १५ हजार सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरिन् ।
यस्तै उपबिजयी देउबाले नगद १० हजार मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरिन् । तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने धादिङ्गकी बविता पुरी र भिन्छेबहालकी कृष्मा बज्राचार्यले नगद ५ हजार सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
चार दिनसम्म संचालन भएको भेट्रान युगलतर्फ पिएफसीका संजय कपाली र श्याम लामाको जोडी तथा कास्कीका दलराज आले र मनबहादुर रानाको जोडी विच भएको प्रतिस्पर्धामा संजय र श्यामको जोडीले जित निकाले । उक्त जोडीले २१–१९, २१–१८ को जित हात पारेको हो ।
बिजयी टोलीले नगद ३० हजार, मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । यस्तै उपबिजयी टिमले नगद १५ हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने आईबिएससीका लक्ष्मण बि.सी. र दिलबहादुर कदङ्गवाको जोडी तथा कालिका क्लबका लोकेश्वर भक्ति र पुर्ण श्रेष्ठको जोडीले नगद प्रत्येक टिमले ७ हजार ५ सय, मेडल, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
१५ लाख अनुमानित लागत रहेको प्रयिोगितामा यु १९ पुरुष तथा महिला एकल खुल्ला, पुरुष युगल र भेट्रान ४५ माथी गर चार विधामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यु १९ पुरुष एकल तर्फ ५० खेलाडी, महिला एकल तर्फ १३, पुरुष युगलमा ५५ जोडी र भेट्रान ४५ बर्ष माथी २१ जोडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
बिजयी खेलाडीहरुलाई प्रमुख अतिथी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले पुरस्कार वितरण गरेकी थिईन् ।
← एनआईसी एशिया बैंकद्धारा खेल पेशाक हस्तान्तरण गोल्डेनगेट र अक्सब्रिज सेमीफाइनलमा →
हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर पुष ६, २०७८
एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा पुष ६, २०७८
मौरिसस विरुद्ध बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई अवसर पुष ६, २०७८
दीप ज्योतीलाई जिल्ला लिगको उपाधि पुष ६, २०७८
रशिला बिश्व वरियताको ७ औं स्थानमा पुष ६, २०७८
नेपाल विरुद्ध मौरिससः एक तिहाई दर्शकले रंगशालामा प्रवेश पाउने पुष ६, २०७८